U-Nadezhda Yermakova wahlaselwa ngenxa yokungabi namthetho kwi-"House-2"
Umntu oye wangena kwi-"Doma-2" uNadezhda Ermakova wayehlala kwi-perimeter iminyaka emine. Intombazana ayikwazanga ukwakha uthando lwakhe, nangona wayenothando olude olude lokudlala noAlexander Gobozov . Kodwa "iNdlu-2" yanika ithemba ithemba lokufudukela kwinkunzi kunye nokufumana umsebenzi kuye.
Ngoku u-Ermakova usebenza njengomphathi ophonsa "Doma-2" kwaye uzive ekhulu kule ndawo. Kwimeko nayiphi na into, kubonakala ngathi ukuhlaselwa kwangoku kwiprojekthi akuzange kuyichukumise.
Ngexesha ngamaxesha kwi-Instagram of Hope u-Ermakova kukho iingxelo malunga nokubonakaliswa kwezinto ezibonakalayo. Izolo u-Ermakova uthumele isimemezelo sokuthi ukudubula okulandelayo kwi-"Dom-2", iindwendwe kunye neengcali kumculi wamanga ziyimfuneko:
U-Nadezhda Ermakova wagxekwa ngenxa yazo zonke "izicathulo" ze "House-2"
Ingakanani le projekthi ikhona, ininzi igxekwa. Ekuqaleni kwezinto ezibonakalayo kubonisa umdla kumdlaleli, kodwa kungekudala iprojekti ibe yinto ebonisa ukuba yinto ekhohlakeleyo. Isibhengezo sabaxhamli kunye nomtsalane wamanga kubangela ukuba ababhalisile ba-Ermakova babe nemvakalelo engalunganga. I-Fallovers ibonise uNadezhda onke amabango abo:
rina_kislaya Indlu yobuhenyu endlwini yakho 2
oksenia____ kapetsstststs ..... Themba ... luhlobo luni lobuqhetseba oluqhubekayo apha .... nangona kunjalo ke wena ... emsebenzini wakho?
unobuntu obubi, akukho bubele, iindlela ezisetyenzisiweyo, ungamthiyi. Yingakho akuyona indlu efanayo neyokuqala. Eminye yale mizilo kwamehlo, kuphela ukuba ukubuyiswa kwakhona kwakukho, kwaye umntu olungileyo akayena umsebenzi "
oksana.s2003 akukho nxibelelwano lomntu eseleyo. Kuphela bafuna ukuba ngubani obani. Amantombazana anama-boobs agubha kunye neengubo kwilizwe lonke. Kwaye aba bantu abalungile. Abazali abampofu ...
U-Nadezhda Ermakova uzame ukumelana neprojekthi, kodwa iingxabano zakhe azizange zenze ukuba ngubani:
... musa ukubhala utywala, kukho okuhle nokubi endlwini, 2 sinakho konke
Xa ebona ukuba umlambo onomsindo awupheli, uNadezhda Ermakova wayeke ukuvimba, ucebisa abalandeli ukuba bashiye iphepha lakhe:
... yima apha uze uye kwiphepha lakho
Ihlazo likaRoyal: umfazi weNkosana uCharles uyathandabuza ukuba uHarry unyana wakhe
Abasebenzisi be-intanethi batyhola uVodonayev noSshkov bengabantu abangaqhelekanga
UDian Shurygin wakhankanya udumo lukaBuzvv, uVolochkov noSobchak
Othandekayo Tarasova Anastasia Kostenko uvaliwe nge Instagram emva kweendaba zokukhulelwa
UKim Kardashian, owaba ngumfazi wesibini owayengumama-ntathu, uqala ukubonakaliswa kwakhe
U-Ivan Okhlobystin udala umzila weTV
U-Alexander Malinin ufumene ubungqina bokuba wakhe ngumntwana
Ifom kunye neendlela zokufunda esikolweni
Unyango lwentloko ngaphandle kweziyobisi
Izipho ezilungileyo kunazo zonke zeMatshi 8
Ukuzivocavoca umzimba, ubunzima bokuqala
Usizi: unengqiqo enkulu
Iingcebiso Eziwusizo Zokucoca I-Plate
I-cedar phytoel yokulahleka kwesisindo
Unyango lwe-inflammation yezilwanyana zamanopharynx
Isaladi kwiebhunge eziliweyo
Ukuba intombazana ifumana ezintathu
Amanyathelo okulungisa abantu ngama-parasites